UDerek (DJ) Soltis, Esq., MBA / MS-NJ & NY kunye neNtengiso yeZindlu, uMkhenketha, uKhuselo loKutyhilwa kunye namaGqwetha okuBhengeza
ikhaya / Amalungu eQela/ UDerek (DJ) Soltis, Esq., MBA / MS
UMphathi woQhelaniso lweeNkohliso-
[Imeyile ikhuselwe]	Umnxeba: 844-533-3367 Ext 11
Kutheni le nto ndaba liGqwetha lokuBambisa ngokuGxila ekuGcinweni kwamakhaya abantu:
Kwiminyaka edlulileyo ndincedile abantu ukuba basindise amakhaya abo, bafumana ukuguqulwa kwemali mboleko, balwela amatyala abo iminyaka yobabini nakwinkundla yomanyano, ndibancedise imali ekukhuseleni imali kumakhaya abo, bahamba abantu ngokubhanga, kunye nokwakha amatyala abo. (Uninzi lwabantu lucinga ukuba ukugcwalisela ukubhengezwa njengongenamali kubhubhisa ityala labo ubomi babo bonke, kodwa oko akukho ndawo iyinyaniso. Sibonisa inkqubo kubantu ababiziweyo "Amanyathelo e-7 ukuya kwi-720 Score Score. " Ukuba ufuna ukubona inqaku elimalunga nokuchithwa kwamatyala kuDityaniswa kwamatyala ngokuchaseneyo nokuchithwa kwemali, cofa apha.) Ndinamava endinawo kwiinkalo zomthetho indlela endisebenza ngayo egxile kuyo.
Kwi-2005 ndawa emanqangeni ngelixa ndisebenza njengoMphathi wesebe IGrainger. Ndityhoboze iqatha lam ndophuka umlenze. Uqhaqho lwesibhozo kamva ngaphezulu kwexesha le-7 unyaka ndihamba nge-limp kwaye ndisebenzisa amayeza eentlungu imihla ngemihla. (UAleve undifumana imini yonke, kodwa ndisakwazi ukukuxelela ukuba injani na imozulu ngokusekelwe kwinani lentlungu emlenzeni wam.)
Ngelixa ndandilaliswe kwaye ndingakwazi ukuhamba, ndancitshiswa yinkampani yam. Ayikho into efana nokugxothwa emsebenzini wakho ukwenza ukuba uphinde uyiqonde imeko yakho. Njengoko ndihlala ndihlala ndisithi, "Izinto ezimbi zenzeka kubantu abalungileyo ngelona xesha linokwenzeka." U-Grainger wayevala amasebe kulo lonke elaseMelika kwaye ndingomnye wamawakawaka abantu ababehamba. Isilivere ebambelele kule meko ibikukuba ngenxa yokukhubazeka kwam ngelo xesha ndakwazi ukuthetha-thethana nomphathi omkhulu wokuqhawula imveliso kunabantu abaninzi abanye abavela kwisebe lam. (Ke, ndinawo amava nomthetho wokuqashwa. Ukusukela ngoko ndiye ndanceda abantu abaninzi ukuba baxoxe ngeephakheji zokuqhawulwa kwemisebenzi kwaye basebenze nabanye kwityala lokubandlulula umsebenzi.)
Ngethamsanqa, ndandikwisikolo sezoMthetho ngelo xesha izinto zaziqala ukuhlelela ecaleni kwam. Kodwa ngelishwa, emva kokuba ndaphuke umlenze, ndanikwa iingcebiso ezimbi ligqwetha elathi laliGqwetha lokulimala lomntu kunye nomhlobo wosapho. Uye wathi andinatyala. Ukuba bendithe ndabonisana nelinye igqwetha lobuNtu boMntu, ngendixelelwe ukuba bendikwazi ukumangalela amashishini amaninzi kwaye bendinokuthatha umhlala-phantsi eFlorida ngokusekwe kwiindawo zokuhlala. Endaweni yoko, ndisebenzela ukukhusela amalungelo abanye abantu kwaye ndiqiniseke ukuba abafumani cebiso libi kubameli. Ngeli xesha, ndinonxibelelwano lobuqu kumthetho woLwaphulo-mthetho lobuNtu kunye nomthetho woxanduva lweMveliso.
Xa ndandikwisikolo sezoMthetho, ndathenga ikhaya leentsapho ezintathu elalikufuphi nesikolo sam kwindawo eyayikude kwaye yayiza. Yonke into yayihamba kakuhle de ndaphuma. Ngequbuliso irent yayiza kufika emva kwexesha okanye ingekenzeki. Ndaba nokugxothwa kwe-5 kwisithuba seminyaka emibini. Abaqeshi bakwazile ukufumana ibugs, bagqobhoza kwigumbi lam elingaphantsi, bantshontsha impahla ebendiyigcinele apho, basebenzise izisongelo zomntwana endaweni yephepha lendlu yangasese egxunyekwe imigca yeelindle kangangezihlandlo ezininzi bezikhukulisa isiseko, omnye umqeshi uhlukumeze abanye abahlali kwisakhiwo ukuze bobabini kwamanye amagumbi ashiywe ngaphandle kwesaziso, okunye ukukhutshwa kunye namagumbi amathathu angenanto emva koko, amagumbi e-2 agcwele iibhugi, igumbi elingaphezulu komhlaba elinamanzi, kwaye malunga neenyanga ze6 ngasemva kwiintlawulo eziya ebhankini. Ibhanki ishukumise ekuboniseni.
Isakhiwo kunye nabaqeshi baphule umoya wam malunga nokufuna ukuphinda ndibenomnini-ndlu kwakhona. Ngoku ndandibekwe ngokomnwe kwaye ndibambe umlenze kwakhona kwi-8 yokuhlinzwa, ndizama ukukhusela umsebenzi osisigxina, kwaye ukubonwa kusentloko kusondele entlokweni yam. Ndakujonga ukubhengezwa njengongenamali, ukudityaniswa kwamatyala, kunye nothethathethwano lwamatyala. Ndenze isicwangciso sam ndaya phambili nayo.
UDerek John Soltis Esq.Ukujonga kwakhona kwe-6 uphononongo
IiSuti zoLuntu, ukuSebenza gwenxa, ukuSebenza ngeMveliso, ukuQeshwa kunye neMihlaba yeeNdawo eziHlangeneyo zeZakhiwo kubandakanya izakhiwo zeMitchel-Lama kwiSixeko saseNew York - andifane ndizithathe ezi ntlobo zamatyala, kodwa ndizimisele ukukunceda ukuba ndikukhombe kwicala elifanelekileyo.
JD - Umthetho weRutger, ENewark NJ
MBA kwiiNkqubo zoLawulo- Icandelo loShishino lwaMazwe ngaMazwe, - IYordan University, ENew York, NY-Honours: UPhi Kappa Phi-Umbutho oHloniphekileyo waseCollegiate (Unikwe i-10 yeepesenti ephezulu yeklasi.), IBeta Gamma Sigma
I-MS, uLwazi kunye neeNkqubo zoNxibelelwano -Ukhethekileyo kwiDistikhi yeNkqubo IYordan University, ENew York, NY - Abahlonishwayo: UPhi Kappa Phi-Umbutho oHloniphekileyo weCollegiate (Unikwe i-10 yeepesenti ephezulu yeklasi.), IBeta Gamma Sigma
I-BBA, Iinkqubo zoLwazi lweKhompyutha, IYunivesithi yaseHouston -Downtown - Abahlonishwayo: UCum Laude, uLuhlu lukaDean 6 iisemesters, iBeta Gamma Sigma - Umbutho wabaSebenzi abaHloniphekileyo
Umsebenzi owenziwe ngaphambi koMthetho wokuziQhelanisa:
Ngaphakathi - Amagqwetha amavolontiya e-Justice, Newark, NJ
Ngaphakathi - Izifundo zamaKatolika-Ukufuduka, Newark, NJ
Ukufunyanwa ngokutsha -Ukusebenza nabaxhamli beenkampani eziphezulu ze100 zoMthetho kunye neNkampani ye100 yeXNUMX
umlawuli -WW Grainger -anoxanduva lwe- $ 18 yezigidi kwiintengiso zonyaka
umlawuli -FedEx Kinko's-Inqanaba lesebe le-37 ebekwe kwi-1095 yenkonzo yabathengi
IBowery Mission, kwiSixeko saseNew York, NY
I-American Red Cross, kwiSixeko saseNew York, NY
Utitshala wezomthetho wasesitratweni - iAlma E. Bendera iSikolo esiPhakathi kunye neZikolo zeDolophu yase-Essex County
IProjekthi yokuKhuthaza ubuNdlobongela baseKhaya kwi-Essex County Court House
Wamkelwe ku IBar New State Bar
I-Federal Eastern District yaseNew York
I-Federal Southern District yaseNew York
Ilayisenisi yokuthengisa izindlu nomhlaba waseNew York
Ukuba ufuna ukwazi ukuba iphume njani le nto ndiza kukuxelela, kodwa ekupheleni kosuku, eyona nto ilungileyo kum isenokungakulungeli. Ke, andizukukunika zonke iinkcukacha njengoko wonke umntu efuna eyakhe inkqubo elungiselelwe imeko yakhe.
Ukuphela kwayo yonke into, ekugqibeleni ndandijamelene nentengiso yesherifu yepropathi yam. Ngethamsanqa, ndakwazi ukufumana ibhanki ukuba ivumelane ngokuthengisa okufutshane ngokusebenzisa i-realtor kunye neqela lokuthengisa elifutshane elithathe uxinzelelo endingafuni kujongana nalo. Ke, endaweni yokuba ndibenembonakalo kwirekhodi lam kwaye ndijongane nesigqibo sokunqongophala esasiza kundilandela ubomi bam bonke, ndasebenza kunye nabatyali mali abakwaziyo ukubetha ebhankini ndaze ekugqibeleni ndathenga ipropathi ngento eninzi kakhulu kunokuba Ndihlawulele yona. Ekuqaleni ibhanki yayicela i-300,000 ye- $ kodwa ukuthengiswa okufutshane ekugqibeleni kudlule kwi- $ 180,000.
Ndandihlala mahala-xa ndandikwiSikolo sezoMthetho, ndafunda okuninzi ngemicimbi yabaqeshi, ukuthengiswa okufutshane kunye nokuthengiswa kwezindlu kunye nokuthengisa izindlu nomhlaba okwandincedayo ukukhulisa isenzo sam esisemthethweni ukusukela oko ndaya kule micimbi. Ukusukela ngoko ndibone abantu abaninzi bekwimeko enye njengam. Uninzi lwabantu lukwazile ukonga amakhaya, abanye baye bathengisa amakhaya abo ukuze bathathe imali, abanye bathengise amakhaya abo, abanye bagcina belahlekelwe amakhaya abo kwindawo yentengiso njengoko babengenayo imali yokonga amakhaya abo okanye ingeniso yexesha elizayo.
Kule minyaka idlulileyo, ndiye ndafumanisa ukuba ndiyakonwabela ukunceda abantu ukuba baphume ematyaleni, kwaye bonge namakhaya abo. Ke i-50% yokuziqhelanisa kwam ijolise ekukhuseleni ibala kunye nokukhululeka kwetyala. Enye i-25% inikezelwe ukukhusela iiasethi zabantu ngokuthi ucwangcise okanye ucwangcise umsebenzi enkundleni. Ndisebenzela ishishini elithile elinxulumene nokuqokelelwa kwetyala kwamanye amashishini, isahluko 11 sokungabinamali, kunye nentengiso yokuthengisa izindlu nomhlaba. Enye i-20% yomsebenzi wam isasazeka phakathi komqeshisi wezezindlu, iisuti zoluntu ezinxulumene nokwenzakala komntu, kunye nomthetho wengqesho. Ndigxininisa kakhulu kubantu kunamashishini ngakumbi xa kuziwa ekuncedeni abantu ukubafumana kwindawo enamagingxigingxi kwaye ukhetho lwabo lusebenzisa inkqubo yenkundla.
Ushicilelo kunye nokuBonakala
Impumelelo emva kokubhengezwa
Ukwakha kwakhona ubomi bakho emva kokubhengeza
Igqwetha uDerek Soltis | Amanqaku egqwetha elichaziweyo kunye neembambano
Igqwetha uDerek Soltis | Ukuqeshwa kwegqwetha
UVeer P. Patel, u-Esq.